Gudoomiyaha Degmada Buula-barde oo codsay in laga taageero sidii Al Shabaab uga guuleysan lahaayeen – Radio Muqdisho
Maamulka Degmadda Buule-Burde ee Gobalka Hiiraan ayaa faahfaahiyay Xafiis Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadaha ay ka hergelisey Degmadaas, kuna tilmaamey tallaabo loo qaadey Ballaarinta adeegadda Dowladda.
Gudoomiyaha Degmada Buula-burde oo la-hadlay Radio Muqdisho Cabdi Daahir Guure waxaa uu tilmaamay in dadka deegaaanka ay dhibaato ku qabeen helida adeegyada Baasaboorka balse hada arrintaas fudutaatay kadib furitaanka Xafiiska.
“Waxey Maamulkeena arrintan u tahay farxad maxaa yeelay dadku waxaa ay Baasaboorada u doonin jiriin Degmooyin kale kuwaas oo xitaa suurto gal tahay inay dhibaatooyin la-kulmaan inta ay safarka ku jiraan balse hada arrintaas waan ka baxnay waxaana xafiis adeegyadaas oo dhan bixin doona laga furay Buula-burde” sidaas waxaa yiri Gudoomiye Cabdi Guure.
Dhanka kale waxa uu Gudoomiyihu ka hadlay dagaalo Ciidanka iyo Shacabka Buula-burde oo iskaashanaya kula jiraan Maleeshiyaadka Al Shabaab waxaana uu sheegay in xili kasta dagaal kula jiraan Al Shabaab kuwaas nabada iyo nolosha dadka Soomaaliyeed kasoo horjeeda.
“Waxaan dagaal toos ah kula jirnaa Al Shabaab kuwaas oo damacsan inay hormarka Degmada iyo dadka hoos u dhigaan balse marnaba u ogolaan meyno arrintaas waxaana kala hortageynaa dagaal inaga oo iskaashaneyna”
Gudoomiye Cabdi Daahir Guure waxaa uu ka codsay Dowlad Goboleedka Hirshabeelle iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya inay garab siiyaan si-ay uga guuleystaan Al Shabaab, waxaa uu tilmaamay Gudoomiyuhu inay u baahan yihiin garab istaaga Dowladda Soomaaliya.
Dakhliga Dalka oo la doboolay ilaa iyo 58% (Faallo)